Kusvirwa na Bamunini Tafadzwa mukoma wacho arikubasa
Taigara tiri two naPrince anova ndiye aive murume wangu.takanga tisati tava nemwana sezvo takanga tichangobva kuroorana.mumwe musi ndakaenda kwadoctor mushure mekunge musoro waitema zvikanzi bp yangu yakakwirisa.
Prince suggested that his younger brother Tafadzwa auye kubva kumusha since ndaiswera ndega.chaaida aive munhu anoswera neni achinditandadza sezvo ndakange ndisirikuenda kubasa.Prince was an auditor at a big firm and everyday aiuya kumba manheru akaneta and aikasika kurara zvaitobhowa.one day Prince travelled to Gweru nebasa early early morning.
Bamunini Tafadzwa vakamuka vakapfeka short vachifamba mupassage.ndakaona munda wemvere dzaive pachest nepahuro dzichinonyura mushort.ndakafreezer coz beche rangu rakabva ratanga kugwinha gwinha.kutaura chokwadi ndakange ndane kanguva ndisingasvirwe zvekuti ndakati ndodii asi ndakazongoti mwari ndibatsirei.
l walked to my bedroom but as u all know nyama inyama.l walked past bedroom rabamunini and l saw him akarara hake nemanhede and l had no option than to walk in.when l got there l was truly on a mission.ndakaisa rwoko pachest pake and he stood up achida kutiza.lwent padoor and l locked it and l walked to him.
Ndakamukisa pahuro and pushed him onto the bed.l followed on top with my legs wide on his body.he looked at me and he said Maiguru dakunyatsokusvirai.ipapo akatanga kundibata nyatso dzemazamhu achiisa mukanwa.in two minutes ndanga ndapasi and akandiyamwa mazamu kusvika ndati yaah.akandibata nerubato rwakanyorovera achikisa muhuro nepadumbu pangu.ipapo akasimuka bva abvisa short mboro yake yakange yakakura and l was shocked.
Chokwadi mukoma vaisara pasi.mboro yakataridziswa pabeche yakatanga kukwidzwa nekudzika ndakanzwa matinji kumerera.maziso akazara misodzi and he whispered-Angeline huya pamusoro.ndakaenda pamsoro ndikainzwa yese kunyura mandiri.akatanga kukoira zvishoma nezvishoma ipapo ndainzwa masides ese ebeche achisvikwa.
Tumisodzi twakatanga kubuda wanike ndatunda.bamunini vakabva vauya pamusoro ndokuvhura angu makumbo ndakanzwa mboro kufamba zvinyoro nyoro vakati vochikoira havo.aiwa vanechiuno.ndokubva vasimukira ndokunditendeudza gumbo saka apa mboro yaipinda nekumashure ndakasvirwa veduwe kunzwa kuti yaaah.mboro yainaka iyoyo ndikanzwa ndakuda kutunda ndikati Lenny ndakuu….uya iye akati tosangana Ange kaniiiiiiiiiii.
Kubva beche richititwa apatese tichichema nekutunda.tapedza akasimuka akagodama akati Iri beche handichasiye and l smiled and said wagara ndiwe Sara pavana.kubva ipapo tinosvirana everyday mukoma vachingobuda zvekuti kamwana aka kanenge kake chete.kusvirwa kunonaka mhani especially vari bamnini.
Kusvirwa na Bamunini Tafadzwa appeared first on Vanodazvinhu.com
Kusvirana 2020, kusvirana 2021, kusvirwa 2021, kusvirwa 2020
Updated: February 23, 2021 — 11:46 am